सातै प्रदेशमा को को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ? ६ वटामा कांग्रेस र प्रदेश १ मा एमाले | Sabaiko Online
Home Flash News सातै प्रदेशमा को को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ? ६ वटामा कांग्रेस...
सातै प्रदेशमा को को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ? ६ वटामा कांग्रेस र प्रदेश १ मा एमाले
काठमाडौं: मुलक संघीय संरचनामा गएपछि प्रत्येक प्रदेश सभामा पनि विपक्षी दलको नेता छानिँदैछन् । राज्यले दिने गाडी र अन्य सुविधा पनि पाइने भएपछि नेताहरुबीच विपक्षी दलको नेता बन्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेताको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रदेश १, ३,४,५,६ र ७ मा नेपाली कांग्रेसका नेता विपक्षी दलका नेता हुँदैछन् भने प्रदेश २ मा मधेसी दलले सरकार बनाए एमालेबाट विपक्षी दलका नेता हुनेछन् ।
विपक्षी दलको नेता हुन संसदीय दलको नेतामा पनि अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्छ । कांग्रेसले प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता चयनका लागि सातै प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएको छ ।
प्रदेश १ मा मिनेन्द्र रिजाल, प्रदेश २ मा विमलेन्द्र निधि, प्रदेश ३ मा डिना उपाध्याय, प्रदेश ४ मा गोविन्द भट्टराई, प्रदेश ५ मा बालकृष्ण खाँड, प्रदेश ६ मा हृदयराम थानी र प्रदेश ७ मा एनपी साउदलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर पठाइएको छ ।
को बन्दैछन् विपक्षी दलको नेता ?
प्रदेश न‌ं. १ को जम्मा ९३ सिटमध्ये कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा १३ गरी २१ सिट जितेको छ । विपक्षी दलको नेतामा सुनसरीका राजीव कोइराला, मोरङका केदार कार्की र उदयपुरका हिमाल कार्कीले आकांक्षा राखेका छन् ।
कोइराला सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’, कार्की मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’ बाट बिजयी भएका हुन् हिमाल उदयपुरको क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका छन् । विपक्षी दलको नेताका लागि प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा छानिन कोइराला र दुई कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार बनाएमा एमालेले विपक्षी दलका नेताको भुमिका पाउनेछ । विपक्षी दलको नेता हुन पार्टीमा संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ ।
प्रदेश २ को संसदीय दलको नेताको लागि एमालेभित्र सहमति बन्न सकेको छैन् । एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवम् प्रदेश संयोजक सत्यनारायण मण्डल र पोलिब्यूरो सदस्य शत्रुध्न महतोले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।
मण्डल सप्तरी १‘क’ र महतो पर्सा ४‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । केपी शर्मा ओली निकट मण्डल र माधव नेपाल निकट महतोबीच चुनाव हुने सम्भावना छ ।
सहमतिको प्रयास सफल नभएकाले निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले बताए । कुल १०३ सिटमध्ये प्रदेश २ मा एमाले २१ सिट जितेको छ । १९ सिट जितेको कांग्रेस प्रदेश २ मा धनुषा ३ ‘क’ का रामसरोज यादवलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ ।
यहाँ कांग्रेसले प्रत्यक्ष ७ र समानुपातिक १७ गरी २१ सीट जितेको छ । प्रदेश ३ मा कुल ११० सांसद छन् । संसदीय दलको नेतामा मकवानपुर २‘ख’ का इन्द्रबहादुर बाँनियाको नाम अग्रस्थानमा छ । बानियाँका साथै काठमाडौं ४ ‘क’ का नरोत्तम वैद्यको नाम पनि चर्चामा छ । प्रदेश ३ को विपक्षी दलको नेता बाँनिया र बैद्य मध्ये एक हुनेछन् ।
प्रदेश नं. ४ मा कुल ६० सिटमध्ये कांग्रेसले १५ सिट जितेको छ । जसमध्ये प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ९ सिट जितेको छ । कांग्रेसको संसदीय दलमा नवलपरासी १ ‘क’ का कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र कास्कीका समानुपातिक सांसद कुमार खड्काले दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नं. ५ मा कुल ८७ सिटमध्ये प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १२ गरी १९ सिट कांग्रेसले जितेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि विपक्षी दलको नेता कांग्रेसले पाउने छ ।
विपक्षी दलको नेताका लागि दाङ ३‘क’ का डिल्लीबहादुर चौधरी, कपिलवस्तु ३‘ख’ का वीरेन्द्रकुमार कनौडिया र पाल्पाका समानुपातिक सांसद वीरबहादुर रानाको नाम चर्चामा छ । चौधरी र कनौडियामध्ये एकजना विपक्षी दलको नेता हुने प्रबल सम्भावना छ ।
प्रदेश नं. ६ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले १ सिट मात्रै जितेको छ । हुम्ला १ ‘ख’बाट जीवनबहादुर शाहीमात्रै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका हुन् । ४० सिट रहेको प्रदेश ६ मा समानुपातिकसहित ६ सिट कांग्रेसले जितेको छ । प्रत्यक्ष जितेका शाही नै संसदीय दलको नेता हुने सम्भावना प्रबल छ । जुम्लाका समानुपातिक सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठको नाम समेत चर्चामा छ ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा ४ प्रत्यक्ष र ८ समानुपातिक गरी १२ सिट कांग्रेसले जितेको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि विपक्षी दलको कुर्सी कांग्रेसले पाउने छ।
विपक्षी दलको नेताका लागि डडेल्धुरा १‘ख’का कर्णबहादुर मल्ल, कैलाली ५ ‘ख’ का डिल्लीराज पन्त, कैलाली १ ‘ख’ का रणबहादुर मल्ल आकांक्षी देखिएका छन् । डोटीका समानुपातिक सांसद देवराज पाठकले समेत इच्छा देखाएका छन् । ५३ सिट रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा विपक्ष नेताका लागि धेरै आंकाक्षी देखिएका छन् ।